भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसबीच फुटको लहर चल्यो। कांग्रेसबाट सोसलिस्ट नेताहरू जयप्रकाश नारायण, डा. राममनोहर लोहिया र आचार्य नरेन्द्र देवहरू बाहिरिए। भारतीय सोसलिस्ट कांग्रेस भन्ने पार्टी खोले। बिपीलाई त्यस पार्टीको महासचिव बनाइयो। सन् १९४२ इ.को ८ अगस्तका दिन बम्बईमा भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसको सम्मेलनमा महात्मा गान्धीले अंग्रेजविरुद्ध अन्तिम लडाइँ लड्ने प्रस्ताव पारित गरी ‘भारत छोड’ आन्दोलनलाई तीव्रता दिए। समस्त भारतीय जनतालाई ‘कि गर कि मर’ भन्ने नारासाथ अघि बढ्न आह्वान गरे।
त्यस आह्वानलाई शिरोधार्य गर्दै भारतीय जनता देशव्यापी आन्लोलनमा उत्रे। यसमा खासगरी कांग्रेस सोसलिस्ट पार्टीका नेताहरू जयप्रकाश नारायण, डा. राममनोहर लोहिया, अच्युत पट्टवद्र्धनहरूले आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुभएको थियो। अंग्रेज शासकले सबै प्रमुख नेतालाई पक्राउ गरी विभिन्न जेलमा राखे। बिपी कोइरालालाई सर्वप्रथम पटनाको बाँकीपुर जेलमा डा. राजेन्द्र प्रसादहरूसँगै राखियो। डा. राजेन्द्र प्रसादले त भारत स्वतन्त्र भएपछि प्रथम राष्ट्रपति बन्ने सौभाग्यसमेत पाउनुभएको थियो। पछि बिपीलाई हजारीवाग जेलमा सारियो जहाँ उहाँका अभिन्न मित्र जयप्रकाश नारायण, डा.राममनोहर लोहियाहरू थिए।
केही महिनापछि जयप्रकाश नारायण र डा. लोहियाहरू हजारीवाग जेल तोडेर भूमिगतरूपमा नेपालको सप्तरी आए जहाँ तत्कालीन राणा शासकले हनुमाननगर जेलमा थुनेका थिए। पछि सप्तरीबासीहरूले ती भारतीय नेताहरूलाई जेल तोडेर निकालेका थिए।
यसरी बिपी कोइराला भारतीय नेताहरूसँगै काँधमा काँध मिलाइ भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलनमा सहभागी हुनुभएको थियो। भारत स्वतन्त्र भएपछि आफ्नो मातृभूमि नेपालमा निरंकुश जहानिया राणा शासन देखेर उहाँले राणाको निरंकुशताविरुद्ध लड्ने अठोट गर्नुभयो। त्यसअनुरूप नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा २००७ सालमा जनक्रान्ति गरी एक शताब्दीको निरंकुश राणातन्त्रलाई धराशायी तुल्याइ प्रजातन्त्र स्थापना गर्न सफल हुनुभयो। २००७ सालको जनक्रान्तिमा बिपीले भारतीय नेता जयप्रकाश नारायण र डा. लोहियासित सहयोग लिनुभएको थियो।
बर्माबाट हतियार ल्याउनदेखि अन्य किसिमका सहयोग पनि गरेका थिए उनीहरूले। यता नेपाली कांग्रेसको जनक्रान्तिलाई साथ दिइ राजा त्रिभुवन दरवार छाडी नयाँ दिल्ली पुग्नुभयो। भारतीय प्रधानमन्त्री पं.जवाहरलाल नेहरुले राजा त्रिभुवनलाई ठूलो सत्कार गरी अतिविशिष्ट व्यक्तित्वका रूपमा हैदरावाद हाउसमा आतिथ्य प्रदान गर्नुभयो। जनक्रान्ति उत्कर्षमा पुगेकाले राणा, कांग्रेस र राजाबीच सम्झौताका कुरा उठे। सम्झौताको विषयमा नेहरु र बिपीबीच कुरा मिलेन। नेहरु आफ्नै ढंगले मध्यस्थता गरी जनक्रान्तिलाई सम्झौतामा टुङ्गयाउन चाहनुहुन्थ्यो भने बिपी पनि आफ्नै ढंगले टुङ्गयाउन चाहने। बिपीले तीनै पक्षलाई एउटै टेबुलमा बसाएर सम्झौता गर्न चाहनुभयो। तर नेहरु भने आफैँ तीनै पक्षसित अलग अलग कुरा गरेर सम्झौता गर्ने चाहना राख्ने। तर नेहरु त्यहाँ शक्तिशाली थिए। राजा त्रिभुवन र राणा शासक मोहनशमशेरहरूले नेहरुलाई नै प्राथमिकता दिन्थे। यसरी अन्त्यमा नेहरुकै रणनीतिअनुसार २००७ सालको जनक्रान्ति समाप्त भई त्रिपक्षीय सम्झौताको नामबाट टुङ्गाइयो।
प्रकाशित: २० श्रावण २०७६ ०९:३७ सोमबार
आन्दोलन सम्झौता बिपी